Site na mmepe ngwa ngwa nke ụlọ ọrụ nke oge a na ọganihu na-aga n'ihu nke ọnọdụ obibi ndụ ndị mmadụ, ọchịchọ ndị mmadụ na igbe mbukota ga-aga n'ihu na-abawanye. Ya mere, ndị na-azụ ahịa ugbu a na-ebute ọkwa dị elu maka ogo igbe. Ya mere ọ choro itinye teknụzụ ọhụụ ...
Kedu ọrụ nke igbe igbe?
Kụ ọkpọ abụrụla ngwa ahịa ahịa dị ike. Igbe igbe eji arụ ọrụ nke ọma nwere ike ịmepụta uru dị mma maka ndị na-eri ihe na uru nkwado maka ndị na-emepụta ya. Ihe dị iche iche ga-akwalite mmepe mmepe nke nkwakọ ngwaahịa dị ka ngwa ahịa na ngwa. Dị ka a na-ere ọtụtụ ngwaahịa na ...
Kedu usoro nhazi dị na ịme igbe onyinye?
Ka igbe onyinye na-ewu ewu n’oge na-adịbeghị anya, ọtụtụ mmadụ na-enwe mmasị ịme igbe onyinye ha. Imirikiti igbe onyinye dị elu na ndụ kwa ụbọchị bụ nke akwụkwọ, akwụkwọ elu akwụkwọ kacha daba maka nhazi. Ọ bụ ezie na igbe onyinye dị mfe, ọ ...